Cameron.....: July 2020
ပိတ်ရက်ရှည်ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်း ကျွန်မ စာအုပ်ဗီဒိုက စာအုပ်ဟောင်းတွေကို ပြန်ယူဖတ်လေ့ရှိတယ်...။ ယူဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဟောင်းတိုင်းမှာလည်း ကျွန်မချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပါမြဲပါနေခဲ့တယ်....။ ဒီထဲမှာ ကျွန်မ အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်က "ကော်ဖီရနံ့"ဆိုတဲ့ အချစ်ရသဝတ္ထုတိုစာစု စာအုပ်လေးပဲ...။ ဖတ်တိုင်းလည်း အရှေ့က နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတွေကို အကုန်ကျော်ခွပြီး နောက်ဆုံတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ပျိုးယုဝသုန်ရေးတဲ့ " အပြာရောင်တောင်တန်းများဆီသို့ လွမ်းချင်း"ကိုပဲ ရွေးဖတ်ဖြစ်တယ်....။ ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ အစွဲနဲ့ မမဝသုန်စာကို အရင်ရွေးဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူး....။ သူ့စာကိုကြိုက်လို့ကို ဖတ်ခဲ့တာပါ...။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ကော်ဖီချစ်သူလေ....။ ကော်ဖီအကြောင်း ဇာတ်အိမ်လေးတွေတည်ပြီး စီကာပတ်ကုံး ရေးထားတဲ့ ရသစာအုပ်လေးဆိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်...။ ဒီထဲမှာ အပြာရောင်တောင်တန်းကို စဖတ်ပြီဆိုတာနဲ့ လက်ကိုင်ပဝါတစ်ထည်အဆင်သင့်ကိုင်ထားရတယ်....။ စာတဝက်မကျိုးသေးဘူး ကျွန်မက ဖတ်ရင်း ဝမ်းနည်းပြီး အလိုလို မျက်ရည်တွေက မဆယ်နိုင်အောင်ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျတော့တာပဲ....။ အဲဒါကလဲ တစ်ခါလည်း မဟုတ် နှစ်ခါလည်းမဟုတ် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖတ်ဖတ် ခံစားမှုက ပြောင်းလဲမသွားဘူး...။ မမဝသုန်ရဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဇာတ်အိမ်လေးက ကျွန်မနှလုံးသားကို ပြိုဆင်းအောင် အမြဲဖမ်းစားထားတတ်လို့ပါပဲ....။
ဒီနေ့ ၂၁.၇.၂၀၂၀ မှာပဲ အပြာရောင်တောင်တန်းများဆီသို့လွမ်းချင်း ဝတ္ထုလေး ကိုးနှစ်တိတိပြည့်သွားပြီ...။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ နှစ်စဉ်မပြတ် စွဲစွဲမြဲမြဲဖတ်နေကျ စာတစ်ပုဒ်ကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် မှတ်တမ်းတင်ထားချင်လို့ ဒီပို့စ်လေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ...။ ကာယကံရှင် စာရေးသူ မမဝသုန် ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်...။ အနုပညာမှာ ဘက်စုံတော်တဲ့ (ဂီတာ, စန္ဒယား, ပန်းချီ, ကဗျာ, ဝတ္ထု, မိတ်ကပ်ပြင်, ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာနဲ့(ကျွန်မမသိတာရှိနေနိုင်သေးသော) မမဝသုန် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ အနုပညာလက်ရာများစွာကို ဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ ဒီပို့စ်နဲ့အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...။ I love you....။
Posted by Cameron at 09:30 No comments:
ကျွန်မ Paillin's Kitchen ရဲ့ သီးစုံသုံးလွှာ ကျောက်ကျောလုပ်နည်းလေးကိုပြန်ယူပြီး လုပ်ထားတာပါ....။ အရမ်းစားကောင်းတယ်....။ အိမ်မှာ တယ်လီဖုန်းကျောက်ကျော ၂၅ဂရမ်တစ်ထုပ်နဲ့ အုန်းနို့ဗူးလဲအဆင်သင့်ရှိနေတော့ လုပ်ကြည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်....။ သရက်သီးအတုံးလေးတွေနဲ့ ကျောက်ကျောအကြည်သားကတစ်လွှာ အုန်းနို့ကတစ်လွှာ သရက်သီးနှစ်ချည်းပဲကတစ်လွှာလုပ်ထားတာ....။ သရက်သီးအချိုနဲ့ အုန်းနို့အဆိမ့်တွဲဖက်ထွက်လာတဲ့ အရသာက တော်တော်လေးကောင်းတာ...။
agar agar 1 3/4 tsp
lychee juice 2/3 cup
agar agar 3/4 + 1/8 tsp
Place all the ingredient of the first layer inasauce pan and bring to boil. Lower the heat and simmer until agar agar powder completely dissolves, about 8 minutes.
Pour the jelly into the glass dish or jelly mold where the mango cubes are placed and leave undisturbed until set. When cool chill the jelly in the refrigerator. Continue the 2nd and 3rd layer as the same. The jelly should separate nicely into3layers,aclean layer with mango cubes,acoconut layer andamango juice layer. Remove from mold, cut and serve cold.
ဖော်ပြပါအချိုးနဲ့ဆို 10x10x1.5 ဗန်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်....။ အိမ်မှာ ဗန်းမရှိလည်း တခြားလေးတောင့်ဖန်ဗူးလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေရာထည့်လို့ရပါတယ်....။ အရေးကြီးတာက တစ်လွှာပြီးလို့ နောက်တစ်လွှာထပ်လောင်းတဲ့အခါ လောင်းထားပြီးသားအလွှာ ခဲမခဲသေချာလက်နဲ့တို့ကြည့်ပြီးမှ နောက်တစ်လွှာထပ်လောင်းထည့်ပါ...။ မဟုတ်ရင် အလွှာလိုက်မဖြစ်ဘဲ အကုန်ရောသွားမှာ....။ ပထမဆုံးအလွှာ(အောက်ဆုံးလွှာ) ပုံမှာပြထားတာကတော့ သရက်သီးတုံးလေးတွေပါတဲ့အလွှာပေါ့...။ ပန်းကန်မှာ ပြင်ဆင်တဲ့အခါ အဲဒီအလွှာကိုအပေါ်မှာပြန်ထားရတာ...။ တယ်လီဖုန်းကျောက်ကျော ၂၅ဂရမ်တစ်ထုပ်ဆို နှစ်ခါလုပ်စားလို့ရတယ်...။
ကိုယ်ကျောက်ကျောထည့်မယ့်ဗန်းထဲကို လေးတောင့်တုံးလေးတွေလှီးထားတဲ့ သရက်သီးလေးတွေကို စီထည့်လိုက်ပါ...။ ပြီးရင် လက်ကိုင်အိုးတစ်ခုမှာ ပထမလွှာမှာ လိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်ထည့်ပြီး သေချာသမအောင်မွှေပေးပါ Lower heat နဲ့ သကြားနဲ့ကျောက်ကျောမှုန့်တွေပျော်သွားပြီး ဆူလာတဲ့အထိအပူပေးပါ..... ။ တအားပွက်ပွက်ဆူနေအောင်မတည်ရပါ...။ ဆူလာတာနဲ့ မီးလျှော့ပြီး ခနလောက်ဆက်မွှေပေးပါ...။ ပြီးတာနဲ့ မီးပိတ်ပြီး စောစောက သရက်သီးတုံးလေးတွေစီထားတဲ့ဗန်းထဲ ဇကာစစ်နဲ့ ဖြေးညှင်းစွာလောင်းချလိုက်ပါ...။ ကျန်တဲ့ အလွှာတွေကိုလည်း ဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်သွားပြီး ကျောက်ကျောမျက်နှာပြင်တင်းပြီးမှ ရေခဲသေတ္တာထဲ အနည်းဆုံး ၃နာရီလောက်အအေးခံပြီးမှ လိုရာပုံလှီးဖြတ်၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ....။
Posted by Cameron at 16:46 No comments:
ဒီနှစ်အတွက် မိုးသီချင်းနောက်တစ်ပုဒ်ကို D-vision နဲ့ featuring A-zeed တို့ဆိုထားတဲ့ "မိုးရွာတိုင်း" Joox ကနေရှာတွေ့ထားပါတယ်....။ တခြားအပုဒ်တွေဖြစ်တဲ့ Lost myself တို့ I'am so lonely တို့ coffee တို့ကိုလည်း ကြိုက်တယ်....။ D-vision ကတကယ်တော့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး နေမင်းခန့်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်တည်းရယ် သူ့အနုပညာအမျိုးစားက Pop နဲ့ R&B သူ့သီချင်းကို Joox က myanmar new hip hop ထဲမှာတွေ့တော့ rapper ပဲထင်နေတာ....။ သီချင်းလေးတွေက အေးအေးလေးနဲ့ကောင်းတယ်....။ မိုးရာသီ မိုးတွေခပ်ဖွဲဖွဲရွာတဲ့အချိန်မှာ နားထောင်ပြီး ခံစားလို့ကောင်းမယ့် သီချင်းမျိုးလေးနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်...။
Posted by Cameron at 20:13 No comments:
Posted by Cameron at 22:10 No comments:
ပိတ်ရက်ရှည်တုန်းက Joox ထဲက ဒီနှစ် မိုးရာသီ သီချင်းတွေစုစည်းထားတာ ဝင်ကြည့်တော့ ကျွန်မတခါမှ နားမထောင်ဖူးသေးတဲ့ ရော့ခ်အဖွဲ့အသစ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Born for You(BFY) ရဲ့ မိုးရွာတိုင်းလွမ်း တွေ့သွားတယ်....။ မိုးကိုချစ်တဲ့သူပီပီ မိုးရာသီရောက်တိုင်း မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ ရှာဖွေ စုစည်း နားထောင်နေကျ တခြား မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းအဟောင်းတွေလည်းပြန်နားထောင်ဖြစ်တယ်...။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပုဒ်ကိုတော့ အထပ်ထပ်နားထောင်မိနေတဲ့ ဒီနှစ်ကျွန်မရဲ့မိုးရာသီသီချင်း.....။
Born for You အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့သား၆ယောက်ရှိတယ်...။ သူတို့တွေထဲက ကျွန်မ instagram မှာ follow လုပ်ထားတဲ့ ဉီးစောဖိုးခွားရဲ့ သား ZIG တစ်ယောက်ကိုပဲသိတယ်....။ သူက rapping အပိုင်းလေး ဒီမိုးရွာတိုင်းလွမ်းမှာ ဆိုထားတယ်...။ Main Vocal ကိုဆိုတဲ့ ချာတိတ်အသံလည်းကောင်းတယ် ကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေကတာ့ Lead , Rhythm နဲ့ Bass ဂီတာရယ်... drummer ရယ် ....။ Born for You ရဲ့တခြားသီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ မလုပ်ပစ်လိုက်နဲ့, အချစ်စစ်လမ်း, ချစ်ရသူ, Hopeless နဲ့ Fake Smile တို့လည်းကောင်းတယ်....။
အောက်မှာ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...။
Vocalist - Daniel Jack, ZiG
Lead Guitarist - Kaw Shee
Rhythm Guitarist - Seng Naw Ja
Bassist - Leo
Drummer - Michael
Backing Vocal/ Guitar - Zoe
Band Manager -John Oscar
Born For You (BFY) isamusic band from Myanmar which is united with young talented members.
Most of the band members are graduated with music major from Liberal Arts Program(LAP) and all the band members are multi-talented musicians.
Winner of Urban Talent (Acoustic) from Duwun Media.
မိုးအေးအေးမှာ လွမ်းမောစရာကောင်းတဲ့ မိုးသီချင်းလေးနားထောင်ပြီး အိပ်ယာထဲ ကာဖီတစ်ခွက်နဲ့ ဖီးလ်နိုင်ကြပါစေလို့စ်.....:)
Posted by Cameron at 15:34 No comments: